Miralem Pjanić oo qiray riyadiisa ugu weyn uu doonayo inuu ku gaaro kooxda Juventus – Gool FM - Idman News
Miralem Pjanić oo qiray riyadiisa ugu weyn uu doonayo inuu ku gaaro kooxda Juventus – Gool FM
(Turin) 09 Okt 2019. Xiddiga khadka dhexe kooxda Juventus ee Miralem Pjanić ayaa muujiyay sida ay ugu wanaagsan yihiin horyaalka Talyaaniga, kaddib guushii ay ka gaareen kulankii Derby d’Italia naadiga Inter Milan.
Miralem Pjanić ayaan meesha ka saarin in riyadiisa ugu weyn ay tahay in kooxda Juventus uu kula guuleysto tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League.
Xiddiga khadka dhexe reer Bosnia ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay waxa uu ku riyoonayo inuu mar uun kula guuleysto kooxda Juventus mustaqbalka dhow:
“Waxaan si fiican uga badinay kooxda Inter Milan, waxaana ku guuleysanay inaan ku soo laabano hogaaminta horyaalka Talyaaniga, tan iyo maalinkii Axada, waxaan kaliya ku fikireynaa sida aan ku ilaashan laheyn”.
“Aragtideyda, waxaan nahay kooxda ugu fiican horyaalka Serie A, waana waxaan ku soo bandhignay garoonka San Siro”.
“Waxaan dooneynaa inaan isku dayno inaan ku guuleysano tartamada kala duwan aan qeybta ka nahay”.
“Laakiin tartanka UEFA Champions League waa riyadeyda shaqsiyadeed, waxaana rajeenayaa inaan kula guuleysto kooxda Juventus xilli ciyaareedkan”.
Miralem Pjanić oo Juventus kaga soo biiray kooxda AS Roma 2016-kii, ayaa kula guuleystay naadiga Bianconeri labo horyaal oo Serie A ah oo isku xigta, iyo 2 jeer oo Coppa Italia ah, Italian Super Cup oo jeer ah, iyadoo sidoo jale Juve uu la gaaray finalka Champions League sanadkii 2017-kii, laakiin waxay guuldaro 4-1 ah kala kulmeen naadiga Real Madrid.
Lukaku oo ka jawaab celiyay weerarkii Isir-faquuqa ahaa uu la kulmay kaddib imaatinkiisa kooxda Inter Milan – Gool FM
Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
Juventus oo ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska Danilo – Gool FM
Previous Previous post: Daawo:- G/Maxamed Mursal “Khilaafkii u dhaxeeyay Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka waan xalinay” – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Next post: Mogadishu Journal » Wafdigii dowladdu dirtay Puntland oo faahfahiyay kulamadii ka dhacay Boosaaso
Somali News – Wararka Soomaaliya (8,678)